Xafiisyada madaxweynaha & raysal wasaaraha oo joojiyey qabashada araajida dadka doonaya wasiir
Home Somali News Xafiisyada madaxweynaha & raysal wasaaraha oo joojiyey qabashada araajida dadka doonaya wasiir
Kaddib markii xafiisyada madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha ay buux dhaafiyeen dad isugu jira siyaasiyiin, wasiiro, xildhibaanno iyo qurba-joog fara badan ayaa waxaa la joojiyey qaabilada iyo qabashada araajida dadka shaqo doonk ah.
Ilo ku dhowdhow xafiisyada madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha ayaa VOA u xaqiijiyey in dad ku dhow 1,000 qof ay soo gudbisteen araaji ay shaqooyinka golaha wasiirada fara ku tiriska ah ku dalbanayaan.
Waxaa jira xildhibaanno, wasiiro horre iyo siyaasiyiin ay ku jiraan qurba joog dib ugu laabtey Muqdisho oo doonaya in ay shaqooyinkaas ay qabtaan golaha wasiirada.
Waxaa kaloo jira culeys badan oo heysta madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha oo ka imaanaya beelaha qaarkooda kuwaasoo xildhibaannada iyo odayaasha dhaqankooda ay wataan shakhsiyad ay xil wasiir la riixayaan iyagoo raba in loo magacaabo xilalka wasiirada ay u arkaan in ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee xukuumada soo socota.
Maxay yihiin wasiirada ugu waaweyn ee loo baratamayo?
Wasiiro iyo xildhibaanno aad ula socda wasaaradaha loo taratamayo ayaa sheegay in ay yihin seddax wasaaradood kuwaasoo kalal ah, Arrimaha gudaha iyo fedaraalka, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda, waana kuwa ugu badan ee dadku daneenayaan.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waa xildhibaannadii u soo joogay dowladihii isaga dambeeyay xilka, waxa uu ansixiyey ra’iisal wasaaraha la magacaabay doortana madaxweynaha.
Xildhibaanka ayaa VOA u sheegay in culeysyada ka jira Villa Somalia ee ku aadan soo magacaabiista golaha wasiirada, wuxuu sheegay in tan iyo markii lagu dhawaaqay ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre in xafiisyada ay ka deggan yihiin ra’iisal wasaaraha iyo madaxweynaha Villa Somalia ay buux dhaafiyeen xildhibaanno, ama dad kale oo ka tiraan bulshada qeybaheeda kala duwan oo isugu jira rag iyo dumar.
Wuxuu sheegay in si aan qiyaas lahayn ay ka socdaan Villa Somalia shirar iyo qaabilaad maadama loo baratamayo xilalka golaha wasiirada cusub.
Si kastaba, waxaa aad loo hadal hayaa nooca ay noqon doonto xukuumada uu soo dhisayo ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre iyo tirada wasiirada uu soo magacaabi doono.
Imtixaanaadkii dowladda Qaadeysay oo maanta baaqday [Sabab]
Mohamed - May 20, 2018
Wasaaradda Waxbarashadda dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta uu baaqday...
27 Kun oo Arday oo maanta galaya Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Sare
Qaramada Midoobay oo War kasoo saartay Dagaalka Tukaraq ka dhacay